Umchamo ushukela kushukela > Ukuhlaziya
Ushukela (ushukela) kumchamo onesifo sikashukela
Kumuntu ophile saka, ushukela ophakathi nomchamo kufanele ube ngu-2.8 mmol. Uma inani layo lenyuke futhi izinkomba zizobe zingaphezulu kwe-3%, lokhu kubonisa ukwephulwa ekusebenzeni kwe-renal tubules. Lokhu kusho ukuthi i-glucose ihlala umchamo, ngakho-ke kubalulekile ukwazi ukuthi wehlisa kanjani ushukela emapayipini omzimba.
Igama lesimo esinjalo lapho kutholakala ukuthi ushukela kumchamo yi-glucosuria. Unganquma ukuba khona kwayo ekhaya, usebenzisa imichilo yokuhlola noma elabhorethri. Kodwa ukuze uthole ukuxilongwa okunembile futhi ukhombe imbangela yokwanda kwe-glucose kumchamo, kubalulekile ukudlulisela ukuhlaziywa komchamo ushukela.
Kepha kungani ushukela egazini nomchamo ukhuphuka. Yiziphi izinkomba zalesi simo futhi izinkomba zingaqondiswa kanjani?
Ukuthola ukuthi kungani ushukela umchamo unyuke, kubalulekile ukuqonda ukuthi luyini umkhawulo wezinso. IGlucosuria iyatholakala lapho ikhuphuka. Imvamisa, kubantu abadala abanempilo, umbundu wezinso awudluli i-10 mmol / L, enganeni - eyi-12,65 mmol / L, futhi kumuntu osekhulile izinkomba zayo ziyehliswa.
Kwezifo zezinso, ezibonakaliswa ukonakala kwama-tubules abo, abuyisa ushukela egazini kusuka kumchamo oyinhloko, umkhawulo wezinso uyancipha. Lokhu imbangela yoshukela emchameni.
Esikhathini sikashukela (renal), inani loshukela osegazini lingahlala lijwayelekile noma linciphise, kepha kuningi kwalo kumchamo. Kwezokwelapha, lesi simo sibizwa ngokuthi yi-glucosuria. Kungenzeka lapho okuqukethwe ushukela kumchamo kuphezulu kakhulu futhi uma umkhawulo kashukela wegazi ungwedlwanga ngisho nangasemuva kokuthuthukiswa kwe-hypoglycemia.
Uhlobo Iabetes mellitus luyimbangela ehamba phambili yokwanda kweglucose yomchamo. Izimpawu zokukhula kwalesi sifo ukugcwala okukhulu kwe-glucose emchameni kanye nenani likashukela egazini elinciphile.
I-glucose ingena emgudwini wegazi ngokusebenzisa izigaxa zezinso ngokusebenzisa amandla e-enxmein hexokinase. Kuhlobo 1 sikashukela mellitus, i-enzyme isebenza nge-insulin futhi isiguli sinomkhawulo ophansi wezinso. Ezigulini, izinqubo ze-sclerotic ezisezinso ziyaqina futhi ushukela umchamo awutholakali, kanti ukuhlolwa kwegazi kukhombisa ukuba khona kwe-hyperglycemia.
Kepha imvamisa isizathu esenza ukuthi ushukela omningi umchamo wenzeke yi-glucosuria yesikhashana yomzimba Kunezinhlobo ezintathu zemibandela:
Okwe-Alimentary. Kubonakala ngokukhuphuka okukodwa kwezinga likashukela emchameni, ngokwesibonelo, ngemuva kokuhlukumezeka kokudla kwe-carbohydrate.
Okwe-Pathological. Umchamo, ushukela uyanda lapho amazinga alo esephezulu kakhulu egazini.
Emotional I-Glucosuria yenzeka ngenxa yemizwa enamandla nokucindezelwa.
Uma ushukela ukhona kumchamo, izimbangela zalesi simo zingalala lapho kukhona ukwephulwa okukhulu ekusebenzeni kwezinso, i-Itsenko-Cushing's syndrome, hyperthyroidism, encephalitis, pancreatitis, ukuvuvukala kwezinso, isithuthwane nokungasebenzi kahle kwengqondo. Ezinye izinto ezithinta amazinga kashukela womchamo ukulimala kobuchopho kobuhlungu, ukucasula uhlelo lwezinzwa, isifo sikaGirke nomkhuhlane.
Kwesinye isikhathi i-glucosuria iba lapho inobuthi ngamakhemikhali (chloroform, morphine, phosphorus). Ezinye izinto ezisikhathazayo ngukuqina kwemisipha, ukusetshenziswa kwama-sedative nama-analgesics, ukuhlukunyezwa kwe-carbohydrate, ukwelashwa kwe-hormonal
Kungani kuphakama ushukela wengane? Uma kunoshukela emchameni, okujwayelekile ezinganeni akufanele kudlule ku-2.8 mmol / l.Lapho ingane ithela ushukela kumchamo ngemuva kokudla okuqukethe ama-carbohydrate asheshayo, lokhu kuyinkomba yokuthi abazali kudingeka bashintshe imithetho yokudla kwengane futhi basuse ukudla okungenampilo ekudleni. Kepha ezinganeni, ukuvela koshukela emchameni, njengakwabadala, kungabangelwa izifo ezahlukahlukene (isifo sikashukela, isifo sokuqina kwengqondo, i-encephalitis).
Kuboniswa kanjani i-glucosuria? Izimpawu zalo zivame ukuvela kusifo sikashukela sohlobo 1. Zihambisana nokwenyuka kwe-glucose yegazi, ebizwa ngokuthi yi-glycemia.
Isimo somtholampilo sibonisa i-glucosuria ne-hyperglycemia:
ukwanda okungenasisekelo noma ukwehla kwesisindo,
ukutheleleka kwamakhemikhali okuchama kaningi
umsebenzi ophansi womzimba.
Uma izindlela zokunciphisa ushukela kwabashukela zingathathwanga ngesikhathi, khona-ke inkambo yalesi sifo izoba nzima. Ngefomu lesifo esithuthukile, ukuhlolwa komchamo ushukela kukhombisa ukuba khona kwezidumbu ze-ketone (acetone).
Izimpawu zefomu elinamandla le-hyperglycemia engapheli i-polyuria nokuqwashisa okungasebenzi kahle.
Ungayibona kanjani i-glucosuria ekhaya?
Ngabe kukhona izindlela zokuthola ngokushesha i-glucosuria ngaphandle kwezimo zomtholampilo? Ukuba khona koshukela emchameni kunganqunywa ngokuzimela kusetshenziswa imichilo yokuhlola.
Ukulinganisa kusekwe kwindlela ye-glucose oxidase. Ukwakheka okusebenzayo kwesinkomba kuqukethe i-peroxidase ne-glucose oxidase enzymes.
Imichilo yokuhlola yenziwa ngezinhlobo ezintathu zemichilo yenkomba (25, 50, 100). I-Kit No. 50 ibhekwa njengekulula kakhulu, futhi inani lemichilo ekuyo lihlala izinsuku ezingama-30.
Umugqa wokuhlola uyisilinganiso se-reagent esilungele ukusetshenziswa esisetshenziswa substrate yepulasitiki. Lapho ukusabela kwenzeka, inkomba ephuzi, etholakala ku-1 mm kusuka emaphethelweni, ipendwe ngombala othile. Imiphumela ihunyushwa ngokulandelayo: uma kungekho glucose kumchamo, khona-ke lokhu kukhombisa ukuthi impendulo ingu, nombala womucu wokuvivinya uhlala ungashintshiwe.
Futhi isho ukuthini le nkomba lapho umbala we-strip ushintsha usuka kokuluhlaza kuya kokuluhlaza okwesibhakabhaka? Lokhu kukhombisa umphumela omuhle. Ukuhlushwa okushukela okuphezulu kakhulu kumchamo, okunqunywa yimichilo yokuhlola, ngu-112 mol / l.
Ukuhlaziywa komchamo ukuze ushukela uthembeke, kubalulekile ukwazi ukuthi ungayisebenzisa kanjani imichilo yokuhlola kahle:
Ngokwenza ucwaningo, kunconyelwa ukuthatha u-30 ml womchamo wasekuseni, oqoqwe ngaphezulu kwamahora ama-2 ngaphambi kokuhlaziywa. Uma uketshezi selugcinwe isikhathi eside, akunangqondo ukuluyisa elebhu, ngoba imiphumela izokwethenjwa.
Ngaphambi kocingo, zonke izinqubo zokuhlanzeka kumele zenziwe.
Umucu wokuhlola osuswe ku-tube kufanele usetshenziselwe imizuzu engama-60.
Into yenkomba akufanele ithintwe.
Imichilo ifakwa kwi-tube yokuhlola enomchamo imizuzwana emi-2, bese ibekwa endaweni ehlanzekile futhi eyisicaba.
Imiphumela izokwaziwa ngemizuzu engu-1-2 ngemuva kocwaningo, ngokuchaza kwayo, umbala owumphumela uqhathaniswa netafula elibekwe ecaleni lepensela.
Izifundo zemitholampilo ezinquma ushukela kumchamo, ukutolika kwazo
Kunezinhlobo ezi-2 eziphambili zokuqoqwa komchamo ukuze kutholakale ushukela kulo - ekuseni nansuku zonke. Okufundisa kakhulu isifundo sansuku zonke.
I-algorithm yokuqoqa umchamo ayinkimbinkimbi. Emini, uketshezi luqoqwe esitsheni esikhulu. Kuyachanywa umchamo wokuqala ekuseni. I-bioametharil eqoqwe igcinwa esiqandisini endaweni yokushisa efinyelela kuma-8 degrees.
Ngemuva kosuku, uketshezi olusembizeni luhlanganiswa futhi luchithululelwe esitsheni esincane esinomthamo we-100-200 ml. Ukuze kuhlolwe umchamo ushukela ukuze unikeze imiphumela enokwethenjelwa, kubalulekile ukwazi ukuthi unganikela kanjani futhi uqoqe ama-biometric ngendlela efanele.
Izitsha zokuqoqa i-Liquid kumele zome futhi zihlanzekile. Umchamo ohloselwe ucwaningo olujwayelekile uvunyelwe ukugcinwa amahora afinyelela kwayi-1.5. Ethangi, kuboniswa imingcele efana nesisindo, ukuphakama kanye nenani lomchamo owabelwe ngosuku kumamililitha.
Uma udokotela ohambelayo eyala ukuba kuqoqwe umchamo kashukela oqoqwe ekuseni, khona-ke i-algorithm yokuqoqa imi kanje: I-30-40 ml ye-ketshezi eqoqwe ekuseni iqoqwe esitsheni esincane. I-Biomaterial iyiswa elabhorethri kungakapheli amahora ayi-6 iqoqwe.
Kumuntu ophile kahle, ama-diuresis ngosuku ayi-1200-1500 ml. Uma inani lidlulile, kutholakala ukuthi i-polyuria iyatholakala.
Kusho ukuthini lokhu? Lapho ukuhlaziya kukhombisa ukweqisa kwenamba evumelekile yomchamo, kwenziwa izifundo ezengeziwe. Ukubonakala komthwalo wamanzi kuwuphawu lwabantu abanesifo sikashukela mellitus sohlobo lokuqala noma lwesibili.
Uma impilo yesiguli ivamile, umchamo wayo unombala ophuziwe. Ngomthunzi ogcwele, kwenziwa ezinye izivivinyo ukuze kutholakale imbangela yokugcinwa kwamanzi kwizicubu. Umchamo onenkomba ejwayelekile yoshukela (okufika ku-0,02%) akufanele ube ne-acetone, phosphates nezinye izinto.
Kuhlobo 2 sikashukela i-mellitus noma isimo saso esincike kakhulu kwe-insulin, izinso zivame ukuthinteka. Ngakho-ke, i-creatinine ilinganiswa ngaphezu kwalokho ezigulini. Umuthi ungumkhiqizo wokugcina womsebenzi obalulekile womzimba otholwe ngesikhathi sokuphendula kwe-biochemical eziphathelene nezinqubo zamandla.
I-Creatinine isibonakaliso esibalulekile esikhombisa izinga lomsebenzi wezinso, isibindi nezinye izinhlelo nezinhlaka. Ukuhlushwa kwento kunqunywa ukuhlolwa kwegazi okune-biochemical kanye ne-urinalysis kashukela.
Imithetho yokuqoqa umchamo iyafana nalena echazwe ngenhla. Imiphumela yokuhlola ikhombisa izinga lento kanye nenani le-creatinine elikhishwe emzimbeni ngamahora angama-24.
I-Creatinine inqunywa ubulili nobudala. Isimo sezinto zansuku zonke emadodeni umchamo sifinyelela ku-2000 mg noma sifike ku-17,7 mmol ngelitha, kwabesifazane - 600-1800 mg noma u-5.3-15.9 mmol / l.
I-creatinine ejwayelekile yomchamo kumchamo nge-1 kg yesisindo, kuya ngeminyaka:
Izinsuku eziyi-1-4 zibalwa ngazinye ngokuya ngefomula ekhethekile,
kuze kube unyaka owodwa - 71-177 μmol,
Iminyaka engu-1-14 ubudala - 71-194 μmol,
Kuze kube yiminyaka eyi-18 - ama-micromoles angama-71-265.
Ushukela we-Urinary kushukela, njenge-creatinine, awukhuphuki njalo. Kepha uma umphumela wokuhlaziya uqinisile, kukhombisa ukulimala kwezinso. Le nkinga ingabizwa ngokuthi yi-diabetesic nephropathy. Ngakho-ke, kubalulekile ukwazi ukuthi wehlisa kanjani ushukela kumchamo, okuzosiza ukunciphisa inani le-creatinine futhi, ngakho-ke, ukumisa ukuqhubeka kwe-nephropathy.
Ungawususa kanjani ushukela emchameni?
Amazinga aphezulu kashukela egazini nomchamo ayingozi ekwakheni izinkinga eziningi. Ngakho-ke, labo abatholwe i-glucosuria, udinga ukwazi ngezindlela ezisetshenziswa ekususeni ushukela emapayilini wegciwane.
Ungasusa kanjani ushukela emchameni? Ukudla okufanele kusiza ushukela ophansi womchamo. Ukusuka ekudleni, kuyadingeka ukususa ukudla okugcwele ama-carbohydrate asheshayo, othosiwe, okubabayo kanye namafutha. Kunconywa ukufaka imikhiqizo yemenyu yansuku zonke ekhipha ushukela emzimbeni - imifino, izithelo ezimuncu, okusanhlamvu, imifino, izinhlobo zokudla zenyama nezinhlanzi.
Labo abanoshukela omningi kumchamo wabo kufanele balahle ngokuphelele utshwala, iziphuzo ezinoshukela, iziphuzo kanye nemilutha yemilutha. Ungawehlisa kanjani ushukela womchamo ngokuzivocavoca? Ezemidlalo ziwusizo kakhulu kwabanesifo sikashukela, ngoba iguqula izinqubo ze-metabolic, futhi futhi ikwazi ukunciphisa isisindo.
Ngisho noshukela emchameni udalulwa kusetshenziswa izidakamizwa ze-hypoglycemic ne-insulin. Ukukhethwa kwezidakamizwa ezilwa nesifo sikashukela kukhulu impela, ngakho-ke uma kutholakala ushukela emchameni, udokotela oholayo kuphela okufanele anikeze ukwelashwa.
Ungawehlisa kanjani ushukela wegazi ngokushesha amakhambi abantu? Ukwenza umuntu abe ne-glucosuria ne-hyperglycemia azizwe engcono, basebenzisa izindlela zokunye zokwelapha ezisehlisa izinga le-glucose emzimbeni.
Uma kutholakale ushukela emchameni, sebenzisa:
amakhambi (i-nettle, dandelion, stevia),
Isazi, kuvidiyo ekulesi sihloko, sizokhuluma ngezimbangela, izimpawu nokwelashwa kwe-glucosuria.
I-Urine Acetone Yesifo Sikashukela
I-acetone kusifo sikashukela yinto eyenzeka kakhulu, ikakhulukazi ezigulini ezingakafundi ukuthi zingasinxephezela kanjani ngokwazo lesi sifo ngokwazo. Imvamisa, lokhu kuba yisibonakaliso sokuqala sokukhula ketoacidosis kanye nokuxhuma okukhulu kushukela wegazi.
Kungani i-acetone ivela kushukela?
Yini usongo lwe-ketonuria?
I-ketonuria ithathwa nini njengesimo esejwayelekile?
Ungayisusa kanjani i-acetone emchameni?
Lesi simo sesivele sidinga ukulaliswa esibhedlela. Kodwa ingabe ama-ketones omchamo ayingozi njengoba ecatshangwa? Ezimweni eziningi ezejwayelekile, umuntu angabuka ukubonakala kwawo ku-fluid ekhululiwe, ezimeni eziningi ekhombisa ushintsho lwesikhashana kumetabolism.
Ukuqonda okungcono kwayo yonke i-patcade ye-pathogenesis yokuthuthukiswa kwalesi sibonakaliso, kungasiza ukuqonda inqubo yenkinga.
Okokuqala, kudingeka wazi ukuthi igama elijwayelekile "imizimba ye-ketone" lifaka izinto ezintathu zokuphawuleka ezingabonakala egazini nasekuseni kwesiguli:
Acetoacetic acid (acetoacetate).
I-Beta-hydroxybutyric acid (β-hydroxybutyrate).
Okwesibili, konke kuyimikhiqizo yokuqhekeka kwamafutha namaphrotheni endo native.
Izizathu zokubonakala kwazo kumanzi we-biological yile:
Ukubuyiselwa kwesifo sikashukela.
Ukuhlanza isikhathi eside nohudo.
Izifo ezithathelwanayo ezinesifo sokuphelelwa ngamandla emzimbeni.
Uma sikhuluma ngokungasebenzi kahle kwe-glucose metabolism, lapho-ke inkinga efanayo nomchamo iyenzeka ngaphansi kwezimo ezi-2 ezihlukile.
I-Hyperglycemia Ngenxa yokushoda kwe-insulin, ushukela omningi awukwazi ukudonswa amaseli obuchopho. Ngakho-ke, amafutha namaprotheni aqala ukubola ngokwakhiwa kwezidumbu ze-ketone. Ngokwanda okukhulu kwesibalo sabo, isibindi siyayeka ukubhekana nokulahlwa kwalezi zinto futhi, ukunqoba isithiyo sezinso, singena kumchamo.
I-Hypoglycemia Kulesi simo, ngenxa yokweqisa kwe-hormone noma ukuntuleka kwe-glucose ekudleni, ukwanda kwamazinga e-acetone emzimbeni kuyabonakala. Isizathu ukuntuleka kwe-substrate yamandla, ekukhiqizweni kwayo lapho umzimba usebenzisa ezinye izinto.
I-acetone yesifo sikashukela iyodwa ayiyingozi enkulu emzimbeni. Kumane kukhombisa ukuthi alikho i-insulin ngokwanele noma ushukela omncane kakhulu wegazi. Lesi simo ngeke sibizwe njengokujwayelekile, kepha ukuphambuka kusesekude kakhulu. Into esemqoka ukulawula izinga le-glycemia futhi uhlolwe ngokungeziwe nge-endocrinologist.
Ukudalwa okungathi sína okungaba khona ngemuva kwesizinda senani elikhulayo lama-ketones umchamo, bese kuthi egazini, yiketoacidosis. Kuboniswa ngokushintsha kwepH kwe-serum kuya ohlangothini lwe-acid. Lo mbuso uboniswa ngamanani wokulinganisa we-acid-base we-≤ 7.3.
Kuboniswa yinkimbinkimbi yezimpawu:
Iphunga eliyinqayizivele elivela emlonyeni.
Konke lokhu kukhombisa ukuqina komzimba futhi kudinga ukwelashwa okwanele. Uma kunganikezwanga isiguli, imiphumela yokuba khona kwe-acetone emchameni onesifo sikashukela ingaba yimbi. Okuyingozi kakhulu ukwakheka kwe-acidosis okusebenzayo. Ingqondo ayitholi ushukela owanele kanti nama-neurocytes “acishiwe”. Iziguli ezinjalo zidinga ukulaliswa esibhedlela ngokushesha esikhungweni sokunakekelwa okujulile ukuze kulungiswe izinga le-pH.
Okwamanje, umuthi wanamuhla unezidakamizwa eziningi zokumisa i-hyperglycemia nokuvikela i-acidosis. Enye yezinto eziphambili zokugcina izinga le-glucose ejwayelekile ukudla.
Impikiswano esebenzayo manje isiza ngokuthi yikuphi ukudla okungcono: i-sub-caloric (enomkhawulo wazo zonke izinhlobo zama-carbohydrate) noma ejwayelekile (kunciphisa ushukela wokugaya kalula). Ngokukhetha kokuqala, ngenxa ye-glycemia ephansi njalo, umzimba ubhubhisa amafutha emvelo ngokwakhiwa kwe-acetone. Kulokhu, lesi yisimo esejwayelekile.
Ezinye izazi ze-endocrinologists zenqaba wona kanye umqondo wendlela yokudla, kepha ukungabi bikho kwemiphumela emibi nemiphumela yokwelapha enhle kwenza umphakathi ucabange ngokuguqula izindlela zakudala zokwakheka kokudla.
Ngokwami, lolu phawu aludingi umuthi osebenzayo. Lokhu kuyiqiniso kuphela uma kubhekwa amazinga kashukela ku-serum futhi yonke imithetho eyisisekelo yokwelashwa kwalesi sifo ibonwa.
Ukususa i-acetone kumchamo ku-mellitus yesifo sikashukela ngalezi zindlela ezilandelayo:
Khulisa umthamo we-insulin.
Khuphula ukungena kwamanzi. Imbangela ye-acidosis imvamisa ukuntuleka komswakama.
Qhubeka / ekwethulweni kwezixazululo ze-0.9% NaCl noma amalungiselelo e-potassium ne-sodium ukuze kubuyiswe ukwakhiwa kwegazi kwe-electrolyte
Kunoma yikuphi, uma i-ketonuria yenzeka, kufanele uthintane nodokotela njalo ukuvimba ukuthuthukiswa kwezinkinga.
Kungani i-urinalysis ejwayelekile ibalulekile kushukela?
Ngaphezu kokuba khona ushukela omningi emchameni, lokhu kuhlolwa kwelabhoratri kwesifo sikashukela kungcacisa ukuba khona kwezinkinga zezinso. Ama-pathologies noma ukungalingani kohlelo lwe-urinary lwenzeka kuma-40% abantu abane-carbohydrate metabolism.
Isifo sezinso sikhonjiswa ngokuba khona kwamaprotheni amaningi kumchamo. Lesi simo sibizwa ngokuthi yi-microalbuminuria: sikhula lapho iprotheni ephuma egazini (i-albhamuin) ingena kumchamo. Ukuvuza kwamaphrotheni, uma kungenakwelashwa kungaholela ekwehlulekeni kwezinso okuqhubekayo. I-Urinalysis kufanele yenziwe njalo ezinyangeni eziyisithupha kusukela ngosuku lokuxilongwa.
Kwesinye isikhathi kufakwa isifundo sokuthola okuqukethwe kwe-diastases kumchamo. Le enzyme yakhelwe ama-pancreas futhi yephula ama-carbohydrate (ikakhulukazi isitashi). Izinga eliphakeme le-diastase livame ukubonisa ubukhona be-pancreatitis, inqubo yokuvuvukala kumanyikwe.
Izenzo ezinokuhlaziywa okuhle kwe-microalbuminuria
Ukuqapha njalo umfutho wegazi kukhombisa nesimo sohlelo lwe-vascular. Ngokufanelekile, iziguli ezinesifo sikashukela kufanele zizimele futhi zivame ukukala umfutho wegazi zisebenzisa i-tonometer (ngoba manje amadivaysi kagesi alula futhi asebenziseka kalula atholakala ngokuhweba).
I-Hyperglycemia kanye namazinga aphezulu emizimba ye-ketone
I-Hyperglycemia ingakhombisa ukuntula kwe-insulin eluhlobo 1 sikashukela noma ukungakwazi komzimba ukusebenzisa le hormone kahle ohlotsheni lwesifo sikashukela sohlobo II.
Uma umzimba ungakwazi ukudiliza ngokuphelele ama-molecule we-carbohydrate, uqala ukusebenzisa i-lipid compounds njengomthombo wamandla wezinqubo ze-intracellular. Yile ndlela ama-ketones akhiwa ngayo: angaba ngumthombo wamandla wamaseli, kepha ngamanani amaningi anobuthi futhi kungaholela esimweni esisongela impilo. Lesi simo sibizwa ngokuthi yi-ketoacidosis; kuvame ukuholela ekwenzekeni kwesifo sikashukela.
Amazinga we-acetone wegazi angalinganiswa ngisho nasekhaya kusetshenziswa imichilo ekhethekile yokuhlola ethengiswa emakhemisi. Izinkomba ezingenhla kokujwayelekile zidinga ukwelashwa okuphuthumayo emtholampilo nokulungiswa kwezokwelapha.
Ungasusa kanjani ukuhumusha i-urinalysis - ikhadi lokushaya
Lokhu okulandelayo kuyizinkomba zesimo esivamile ekuhlaziyeni umchamo nezinkomba zesigaba esinciphile sesifo sikashukela kanye ne-pathologies ye-renal ehlobene.
Izici: Norm Isifo sikashukela
Umbala Udosi ophuzi Yehla ngobukhulu bomibala noma umbala ogcwele
Amamatheke Unsharp Ukuba khona kwephunga le-acetone ngokubola okukhulu ne-ketoacidosis
Umswakama 4 kuye ku-7 Kungaba ngaphansi kuka-4
Ubukhulu 1.012 g / l - 1022 g / l Ngaphansi noma kungaphezulu kokujwayelekile (lapho kukhona ukwehluleka kwezinso)
I-Albuminuria (iprotheni emchameni) Akekho futhi ukhona ngamanani amancane Yethula nge-microalbuminuria ne-proteinuria enzima
IGlucose Cha (noma kungabi ngaphezu kuka-0.8 mmol / L) I-Present (i-glycosuria ikhula lapho kufinyelelwa izinga likashukela wegazi elingaphezu kuka-10 mmol / l)
Izidumbu zeKetone (i-acetone) Cha Yethula ekubuyeni kwemali
Bilirubin, hemoglobin, usawoti Abekho Akukhombisi
Amangqamuzana abomvu egazi Abashadile Hhayi isimilo
Amagciwane abekho Yethula nezilonda ezihambisanayo ezithathelanayo
Ukuhlola umchamo kanjani futhi kuphi
Ngaphambi kocwaningo, akufanelekile ukuthatha ama-diuretics nemikhiqizo ethinta ukuguqulwa kombala komchamo. Ukuhlaziya okujwayelekile, umchamo wasekuseni usetshenziswa inani elinga-50 ml. Umchamo uqoqwa esitsheni esihlanzwa ngokuhlanzekile (oyinyumba).
Wonke umuntu angakwazi ukuhlola umchamo ngokuthanda kwakhe. Lokhu kuhlaziya okulula futhi okukhombisa kakhulu ukuthola izifo eziningi. Izifundo zaselebhu zenziwa hhayi kuphela yizikhungo zezempilo zikahulumeni, kodwa futhi nemitholampilo eminingi yangasese. Kodwa-ke, kufanele kukhunjulwe ukuthi kuphela ochwepheshe abaqeqeshiwe abangakwazi ukukhipha i-urinalysis kahle.
Uzobeka ezinye izivivinyo ezingeziwe. Uzodinga nokubonisana nodokotela we-endocrinologist, urologist, gynecologist. Uma ukuba khona kwesifo sikashukela kuqinisekisiwe, kuyadingeka ukuqala ukwelashwa ngokushesha: lokhu kuzovimbela ukuthuthukiswa kwezinqubo ezihlobene ze-pathological kanye nezinkinga.
Izimbangela zoshukela emchameni
Esimweni esijwayelekile sokusebenza komzimba womuntu, kwamukelwa ukuthi umchamo uwuhlobo lwe-ultrafiltrate yengxenye ewuketshezi yegazi, isb. i-plasma. Ngokwakheka kwe-biochemical ne-electrolyte, umchamo ne-plasma kunokwakheka okufanayo. Kumele kwaziwe ukuthi emsebenzini wohlelo lokuchama kuwumkhuba ukwahlukanisa izinhlobo ezimbili zomchamo: eyokuqala neyesekondari.
Inokwakheka okufana ne-plasma, ngaphandle kwamaprotheni angenakudlula lapho kusebenza khona izinso. Kumchamo oyinhloko, ukuhlangana kwe-glucose kuhambelana nokuxhunywa koshukela egazini. Kamuva, kusuka kumchamo oyinhloko ohlelweni lwama-renal tubules, kunokubuyiselwa okuphelele kwe-glucose, uma kungamanani omzimba womzimba.
Umchamo ushukela kushukela
Isifo sikashukela, kuphakama inkinga ngenxa yokwephulwa kokudla ushukela. Lokhu kungenxa yokuntuleka komzimba okhiqiza i-hormone insulin. Ngalesi sizathu, ushukela owedlulele ukhishwa ezinsweni ngomchamo. Ngakho-ke, ushukela owengeziwe kumchamo uhlala uphawulwa.
Uma i-glucose kumchamo itholwa inani eliphakeme le-1 mmol, khona-ke lokhu kubonisa ukungabikho ngokuphelele kwesifo sikashukela. Uma izinkomba zisusela ku-1 kuye ku-3 mmol, kukhona ushintsho lwe-pathological ekuvumeleni ushukela. Uma kungaphezu kuka-3 mmol, khona-ke lokhu kukhombisa ubukhona besifo sikashukela. Ngokomqondo, lokhu kuwukujwayelekile kokuqukethwe ushukela kumchamo wesifo sikashukela. Uma inkomba idlula i-10 mmol / l, khona-ke lokhu sekuyisimo esiyingozi esigulini esinesifo sikashukela.
Ushukela umchamo uyingozi kanjani kumuntu onesifo sikashukela?
Ukuba khona kwe-glycosuria kwisifo sikashukela kunomthelela ezinkingeni ezinjalo:
ukuthembela kwi-insulin, okungukuthi, uhlobo lwesibili lokugula luphenduka olokuqala,
ukuphazamiseka kokuqanjwa kwemisipha yenhliziyo, i-arrhythmia,
Isifo sikashukela ne-nephropathy,
ukuhluleka kwezinso nezinhliziyo,
ukuphazamiseka kwengqondo ebuchosheni,
ketoacidosis ne polyuria.
Izimpawu ze-glycosuria kwabesifazane nakwabesilisa
Isimo somtholampilo esinezinga elithile likashukela kumchamo sinezimpawu ezinjalo:
ukoma okungapheli okungenakusuthiswa
ulwelwesi lwe-mucous olwedlule lwesiqalo somlomo,
ubuthakathaka bomzimba nokukhathala okusheshayo,
ama-syndromes ebuhlungu bemisipha,
Nge-glycosuria, izinto eziwusizo zihlanzwa ngomchamo, ngoba umzimba wonke uhlupheka. Kulokhu, isiguli siqala ukukhuluphala ngokweqile, kepha nokho silahlekelwe ngamakhilogremu, okungukuthi, ukunciphisa umzimba.
Ungayiphatha kanjani i-glycosuria?
Ukwelashwa kunqunyelwe kusisekelo sokuhlolwa nezimbangela ze-glycosuria:
Uma lesi sifo sitholakala phambi kwesifo sikashukela, khona-ke ukwelashwa kuqondiswe ekujwayelweni kwe-glucose egazini. Kubaluleke kakhulu ukwanelisa izicubu namaseli ngezinto eziwusizo, ngakho-ke kusetshenziswa ukwelashwa ngamavithamini, bese kulandelwa ukudla okukhethekile. Isici - imikhawulo yesineke ekuphuzeni uketshezi. Kepha udinga ukwenza lokhu kancane kancane ukuze ukomisa kungenzeki.
Uma umzimba ungakwazi ukuzimela ngokuzimela ukhiqiza inani elanele le-insulin, khona-ke ukwelashwa kwe-insulin kuphoqelekile. Ngohlobo loku-1 lwe-mellitus yesifo sikashukela, umthamo we-insulin uyanda, futhi ngohlobo lwe-2, kudakwa izidakamizwa ezikhethekile - amaphilisi okwehlisa ushukela. Funda kabanzi mayelana nokwelashwa kwezidakamizwa sikashukela lapha.
Nge-glycosuria, i-diuresis iyakhula, ngenxa yokuthi wonke amaminerali awusizo ayagezwa. Futhi lokhu kwandisa umsebenzi wenhliziyo nohlelo lokujikeleza kwegazi. Ngakho-ke, izidakamizwa ezinjengoPotassium Chloride, Asparkam, Potassium Magnesium Asparaginate, Panangin nabanye ziyabekwa.
Isisekelo sokwelashwa ukudla okungafaki ukusetshenziswa kwamaswidi nokudla okunosawoti ngokweqile, kanye nenyama ebhemayo, ukudla okusemathinini, ukudla okusheshayo neminye imikhiqizo eyingozi. Kepha udinga ukudla izithelo nezithelo zemifino entsha, inyama ebilisiwe, isinkwa se-bran, njll.
Udinga ukudla okungenani izikhathi ezi-5 ngosuku ngezingxenye ezincane.
Amazinga we-glucose kufanele abhekwe nsuku zonke. Lokhu kungenziwa ekhaya.
Ukusiza ukuqeda i-glycosuria, izindlela zokupheka zomunye umuthi nazo zizosiza. Banciphisa ngokweqile izinga loshukela emchameni, bamnene futhi bavikelekile ngokuphelele emzimbeni.
Okuhle kakhulu zokuphekaezisetshenziswa ekwelapheni okuyinkimbinkimbi:
Le iresiphi ifaka ukusetshenziswa kwamaqabunga owomile noma amasha wezitshalo ezinjalo - i-nettle, blueberries. Uzodinga futhi impande ye-dandelion. Hlanganisa izingxenye ezihlakazekile ngezilinganiso ezilinganayo, ukukala izipuni ezi-2 bese uthela amanzi abilayo ngevolumu engu-400 ml. Kungcono ukusebenzisa i-thermos ekugcizeleleni. Faka imizuzu engama-20-30. Ngemuva kwalokho umhluzi uyahlungwa futhi usetshenziswe ngaphakathi kwezikhathi ezi-3 ngosuku, 70-80 ml.
Thenga okusanhlamvu kwe-oat okungacoliswanga endebeni eyodwa. Hlanganisa ne-1 litre lamanzi bese ubeka umlilo. Ngemuva kokubilisa, pheka imizuzu engama-60. Cindezela ngemuva kokupholisa umhluzi futhi udle ngaphakathi kwe-100 ml ngaphambi kokudla ngakunye.
I-brew blueberry ishiya emanzini. Kwindebe e-1 yamanzi abilayo uzodinga isipuni esisodwa namahhafu amaqabunga. Phuza ingxenye yengilazi (100 ml) kathathu ngosuku ngaphambi kokudla.
Yidla isinamoni. Kungangezwa eziphuzweni zetiye, i-kefir, iyogathi nokunye. Kufika kuhafu wesipuni sesinamoni uvunyelwe ukudliwa ngosuku. Ungathola imininingwane eminingi mayelana nezakhiwo zokuphulukisa zesinamoni zesifo sikashukela lapha.
Uma usondela kakhulu ekwelashweni nasekulawulweni kwezinga le-glucose ku-fluid fluid nomchamo, ungasusa ngokushesha i-glycosuria. Qiniseka ukuthi uthintana nodokotela wakho, kanti-ke izinkinga ngeke zongele impilo yakho.
Ukuhlaziywa koshukela kumchamo: izinkambiso, izizathu zokwanda nezindlela zokuqinisa izinkomba
Lapho isiguli sihlolwa, kwesinye isikhathi siye sikhuphule ushukela emchameni waso.
Lokhu kungaba wuphawu lokukhula kwesifo sikashukela noma esinye, isifo esingesibi kangako.
Ngakho-ke, ezimweni ezinjalo, ukuhlolwa okuningiliziwe kuyadingeka.
I-Glucosuria - kusho ukuthini?
Uma, ngenxa yokuqukethwe ushukela omningi kumchamo, amandla ezinso okuhlunga ancishisiwe, i-glucosuria yenzeka kumuntu.
Kunezindlela eziningi ze-glucosuria:
amazentary. Nalu hlobo lokuhlushwa ushukela lukhuphuka kafushane. Njengomthetho, kucasulwa ukusetshenziswa kokudla okuphezulu kuma-carbohydrate,
okokugcina. Ukwanda kwenani loshukela emchameni kungenzeka uma ngabe kwenziwa kakhulu igazi egazini,
ngokomzwelo. Ikhula ngenxa yokwanda kwamazinga kashukela ngenxa yokuxineka kwangaphambilini noma ukucindezeleka okungapheli. Ukugula okunjalo kuvame ukwenzeka kwabesifazane abakhulelwe.
Uma kutholakala okungahambi kahle, funa ukwelashwa.
Izinto eziningi zingathinta ukukhula kwe-glucosuria. Le yi-pancreatitis eyingozi, futhi enobuthi ngezinto ezithile, nezifo zezinso ezahlukahlukene.
Ingabe kukhona ushukela emchameni onodidi 1 nohlobo 2 lwesifo sikashukela?
Ukwanda kwe-glucose kumchamo kuhlobo 2 sikashukela kuvame ukubonwa uma lesi sifo siqhubeka.
Kulokhu, ushukela owengeziwe egazini nomchamo uvela ngokulingana. Uma izinga lamaprotheni libuye likhuphuke, lokhu kungaba ubufakazi bokulimala kwezinso.
Kepha ukuzijwayeza kukhombisa ukuthi kaningi, izinkomba ziyanda ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo loku-1 ezethembele ku-insulin.
Ukwehliswa kokuhlaziywa: izinkambiso zeminyaka nezizathu zokwanda
Lapho i-ushukela egxiliswa umchamo ingeqi ku-2.8 mmol, lokhu kubhekwa njengokujwayelekile.
Uma izinkomba zikhulu, isiguli sivame ukuthunyelwa ukuze siyohlolwa.
Ebantwini, le ndlela ejwayelekile iphakeme kancane - 3.0 mmol. Kubantu asebekhulile, nayo ingandiswa. Lapho ukuhlaziywa kwenziwa enganeni, i-2,8 mmol ibhekwa njengeyamukelekayo, njengakwabadala.
Izizathu zokweqisa kwazo ezinganeni zivame ukwehluka. Lokhu ukuhlukunyezwa kokudla okusheshayo, amaswidi nokunye ukudla okungenamsoco okuthandwa yizingane kakhulu. Ezimweni ezinzima kakhulu, ukwanda kwe-umchamo glucose kungadala i-encephalitis noma i-meningitis.
Ushukela omningi kumchamo ngesikhathi sokukhulelwa
Kubalulekile ukwazi! Izinkinga ezinamazinga kashukela ngokuhamba kwesikhathi kungaholela ekutheni kube nezixuku zonke zezifo, njengezinkinga ngombono, isikhumba nezinwele, izilonda, i-gangrene kanye namaqhubu omdlavuza! Abantu bafundise okuhlangenwe nakho okumunyu ukuguqula amazinga abo kashukela ajabulele ...
I-Glucosuria kwabesifazane abasezikhundleni bavame ukukhuluma ngesimo sabo semizwa esingazinzile noma ubuthi obunzima.
Kwesinye isikhathi lokhu kungaba ngumphumela wokungondleki kahle uma umama okhulelwe edla ukudla okuningi okuqukethe i-carbohydrate.
Lapho ukuguquguquka kweshukela kwenzeka njalo, ukuhlolwa okwengeziwe kufanele kwenziwe.
Uma umchamo wesifazane ungaqukethe ushukela kuphela, kodwa futhi namaprotheni, lokhu kungasho ukukhula kwe-cystitis, ukutheleleka noma inqubo yokuvuvukala ezinso.
Izingozi nemiphumela ye-glucose ephezulu kumchamo
Izinga likashukela eliphakeme lomchamo libonisa ukungahambi kahle emzimbeni.
Uma lokhu kwanda kungukuphela kwecala, asikho isizathu esithile sokukhathazeka.
Lapho lokhu kwenzeka ngaso sonke isikhathi, futhi izinga likashukela lidlula okwejwayelekile ngaphezu kwe-12 mmol ilitha, lokhu kukhombisa ukuba khona kwesifo sikashukela.
Ngokuhlushwa ushukela okuthe xaxa emchameni, izifo zenhliziyo zingakhula, futhi isimo semikhumbi siye siwohloka. Isibindi sithinteka kakhulu, uhlelo lwezitho zofuzo luyawohloka. Ngaphezu kwalokho, lokhu kuzosithinta kabi isimo sesikhumba.
Kubaluleke kakhulu ukulawula amazinga namaprotheni noshukela ngesikhathi sokukhulelwa, ngoba ukuphambuka kubangela i-pathologies enganeni.
Yini okufanele yenziwe ngabanesifo sikashukela ukwehlisa ukusebenza kwabo?
Indlela yokuphila enempilo, ukudla okufanele, nokusetshenziswa kwemithi nakho kusiza ukwehlisa amazinga kashukela.
Lapho i-glucosuria ilusizo ukuphuza itiye eliluhlaza nge-ulamula
Iziguli kufanele zigweme ukudla okuqukethe ushukela, kufaka phakathi izithelo ezintsha. Ukuphuza utshwala akukhuthazwa ngokwezigaba, kepha itiye eliluhlaza ngesiphu selamula elihlikihla igazi yilokho okudingayo.
Ukuvela kweshukela kumchamo wesifo sikashukela kubonisa ukunxeshezelwa okunganele ngalesi sifo.
I-glucose esegazini akufanele ikhuphuke kuphela, kodwa ibalulekile. Uma kutholakala ushukela kumchamo, udokotela unquma isifundo.
Kuzosiza ukukhomba imbangela yenkinga futhi kunikeze nenkambo yokwelashwa. Ukwelashwa kwesifo sikashukela kungenzeka futhi kufanele kulungiswe.
Ukwelashwa ngemithi yabantu
Amakhambi e-Folk azosiza ukudambisa izimpawu zesifo futhi asuse ushukela owedlulele. Okulula, kepha okusebenzayo impela, yi-decoction noma ukumnika kwamaqabunga aluhlaza okwesibhakabhaka. Kwanele ukuthatha izipuni ezintathu ezinkulu zezinto zokusetshenziswa okungavuthiwe, uthele amanzi abilayo bese ugcine ku-thermos amahora angu-4-5. Ukumiliselwa okucijile kudakwa ezinkomishini eziyi-0.5 cishe isigamu sehora ngaphambi kokudla.
Kunezindlela zokupheka ezimbalwa ezithandwayo ezizokusiza ukususa ushukela emchameni:
thatha izingxenye ezilinganayo izimpande ze-dandelion, i-Blueberry namaqabunga amancane. Thela konke lokhu ngamanzi abilayo, umusi imizuzu eyi-10 no-strain. Baphuza umuthi ngemithamo emincane kakhulu - 15 ml lilinye. Kuyadingeka ukuthatha izikhathi ezi-3 ngosuku, isikhathi sokwelashwa siyizinsuku eziyi-10,
Hlambulula imbewu ye-oat, pheka ihora. Kufanele kube khona amanzi amaningi ephindwe kahlanu. Ngemuva kokuhlunga, umhluzi udliwa engilazini ngaphambi kokudla,
ukusetshenziswa kabhontshisi obomvu, owamanziswa ubusuku bonke, kuzosiza nokukhipha izimpawu ezingathandeki.
Noma ngubani ongemuhle ngamakhambi esintu angazama i-acupressure. Kunconywa ukukwenza kuphela ngemuva kokubonana nodokotela.
Ukuze ungaphinde uhlangane nephunga elingemnandi kangako njenge-glucosuria, futhi ubhekane nalesi sifo uma kwenzeka ukukhula, kubalulekile ukulandela indlela yokudla.
Udinga ukudla ngezingxenye ezincane, kepha kaningi, okungenani izikhathi ezine ngosuku. Ngakho-ke ama-carbohydrate azodonswa kancane, okuvimbela ukwanda koshukela.
Ukudla okunamafutha, okumnandi futhi okunosawoti, kuzodingeka kungafakwa ekudleni. Imenyu kufanele ibe ne-fiber eyengeziwe ne-fiber yokudla, okuzothinta kahle i-lipid spectrum futhi isize ekunciphiseni ukuhlangana kwe-glucose.
Kuyadingeka ukuqapha irejimeni yosuku futhi unikeze isikhathi nemfundo yomzimba, esiza ukwamukela ushukela kangcono.
Kungani umchamo ushukela kushukela? Izimpendulo kuvidiyo:
I-Urinalysis wucwaningo olubalulekile olukuvumela ukuthi ukhombe ukungahambi kahle emzimbeni nokuqala ukwelashwa okufika ngesikhathi. I-Glycosuria ingakhombisa ukuba khona kwezinkinga ngesibindi, izinso nobuchopho. Uma uthatha izinyathelo ngesikhathi, uvame ukuphatha ukubhekana nalesi sifo futhi uvikele nezinkinga ezinkulu.
Kungani ushukela uvela umchamo onesifo sikashukela futhi uyingozi kangakanani?
I-glucose kumchamo onesifo sikashukela ihlala ibonwa, ngoba kubantu abanesifo sikashukela kunokungaphezulu komkhawulo wezinso, ngenxa yalokho ushukela ukhishwa umchamo. Le nqubo ibizwa ngokuthi i-glycosuria. Uma ukuvikeleka kwe-insulin kungabi ngaphezu kuka-5.5 mmol / l, ushukela emchamweni uyadedelwa ngamanani amancane. Lokhu kuvame ukwenzeka kubantu abanempilo.
Uma i-glucose kumchamo itholwa inani eliphakeme le-1 mmol, khona-ke lokhu kubonisa ukungabikho ngokuphelele kwesifo sikashukela.
Uma izinkomba zisusela ku-1 kuye ku-3 mmol, kukhona ushintsho lwe-pathological ekuvumeleni ushukela. Uma kungaphezu kuka-3 mmol, khona-ke lokhu kukhombisa ubukhona besifo sikashukela. Ngokomqondo, lokhu kuwukujwayelekile kokuqukethwe ushukela kumchamo wesifo sikashukela.
Uma inkomba idlula i-10 mmol / l, khona-ke lokhu sekuyisimo esiyingozi esigulini esinesifo sikashukela.
Ungawususa kanjani ushukela emchameni onesifo sikashukela: izimbangela nokwelashwa
I-Glucosuria yisimo lapho kutholakala khona amathambo kashukela emchameni, okubonisa i-pathology ye-carbohydrate metabolism. Imvamisa lokhu kwandulelwa ukubola kweshukela. Ushukela womchamo uwuphawu lokugeleza kwegazi kwe-renal engasebenzi kahle noma ukuhlunga kwama-carbohydrate yi-renal glomeruli. Kepha kungenzeka yini ukukhipha ushukela emchameni onesifo sikashukela nokuthi ungakwenza kanjani?
Phakathi kwezimbangela zalesi simo, izinqubo ezilandelayo ze-pathological ziyahlukaniswa:
Izifo ze-Endocrine - i-mellitus yesifo sikashukela, i-hyperthyroidism, amazwe e-cushingoid.
Izinkinga ze-Nephrological - glomerulonephritis, pyelonephritis, nephritis ephakathi nendawo.
Ukungasebenzi kahle kwe-Neurological and psychiatric dysfunctions - isithuthwane esinzima, i-meningoencephalitis, i-ischemic noma i-hemorrhagic stroke.
Ukulimala kobuchopho kobuhlungu.
Into enobuthi - uma kwenzeka ubuthi unezinto ezinjenge phosphorus, morphine, carbon monoxide.
Phakathi kwezimbangela zalesi simo, isifo sikashukela esigabeni sokudonswa kwemali kubhekwa njengokuvame kakhulu. Ngaphezu kwalokho, i-glycosuria ivame kakhulu phakathi kwabanesifo sikashukela sohlobo 1. Kulokhu, ushukela emchameni ungatholwa ngesikhathi sokukhulelwa, noma kungekho shukela. Lolu phawu lukhombisa ukuthi umzimba wesifazane ubhekene nengcindezi ngokweqile.
Phakathi kokunye okubangela i-glucosuria kungaphawulwa:
ukwelashwa kwama-hormone ngama-steroid noma izidakamizwa ze-adrenocorticotropic,
Ukudla okuphezulu kuma-carbohydrate alula,
ingcindezi, ukungezwani kwemisipha ngokweqile,
ukusetshenziswa isikhathi eside kwezidakamizwa noma ama-painkillers.
Ngalesi sifo, ukukhula kwe-insulin, noma i-insulin evumela ukuthi ushukela kudonswe amaseli. Ngokuntuleka kwayo, i-glycemia iyanda, okungukuthi, ushukela wegazi uyanda. Umzimba kufanele ususe ushukela omningi egazini, ngakho-ke uhlungwa izinso, ngenxa yokuthi zikhishwa emzimbeni.
Ukuze kutholakale iqiniso le-glucosuria, izindlela zokuxilonga ziyenziwa, kufaka phakathi izindlela zokulinganisa neziningi. Amasu wokulinganisa enza kube lula ukuthola iqiniso le-glucosuria. Le yindlela eshibhile futhi esheshayo yokuhlola isiguli; imichilo ekhethekile yokuhlola imvamisa isetshenziswa, kepha ayinakho ukunemba okuphezulu.
Izindlela zokulinganisa zizwela kakhulu ngoba kusetshenziswa imishini ekhethekile yelebhu. Ukusungula iqiniso le-glucosuria, kusetshenziswa izindlela eziyinkimbinkimbi zamakhemikhali, umphumela wazo okuvumela ukuthi uthole inani eliqondile loshukela emchameni.
Funda nokuthi Ungasibona kanjani isifo sikashukela kubantu besifazane
Ku-mellitus yesifo sikashukela, ukubonakala kwe-glucose kumchamo kuhlotshaniswa ngqo nokwanda kwama-indices we-glycemic. Okusho ukuthi, izimpawu azifani noshukela wegazi ophezulu:
ubuthakathaka, ubuvuvu, ukukhathala, ukubekezelela okungaphansi kokuzivocavoca,
ukoma, umlomo owomile, isikhumba,
ukuchama okusheshayo ezingxenyeni ezinkulu,
ushintsho kwesisindo somzimba, kanye nenkambo ende yezinqubo zokutheleleka, uma kuziwa ekunqumeni kwesikhathi eside kwesifo sikashukela i-mellitus.
Uma lesi simo singalashwa ngesikhathi, khona-ke kuvela lesi sifo esinamandla, esihambisana nokulandelayo.
Ukuthuthukiswa kwe-ketoacidosis, lapho kuvela khona izidumbu ze-ketone emchameni. Imvamisa lesi simo sihambisana nephunga elijwayelekile lomchamo, sizwa iphunga le-acetone elisuka emlonyeni.
Ezimweni ezimbi kakhulu, ukwephulwa kokuqwashisa ngamandla kungahle kuze kufinyelele kuhlutho.
I-polyuria ephikelelayo ngobunono bomchamo obunciphile.
Cishe wonke umuntu onesifo sikashukela wacabanga ngokuthi ungawususa kanjani ushukela emchameni onesifo sikashukela.
Okokuqala, basusa izimbangela eziholele kulesi simo, ngoba i-glucosuria akuyona indawo ye-nosological, kodwa iyimpawu.
Kulokhu, isiguli sinqunyelwe ukudla okukhethekile okunemikhawulo ebukhali yama-carbohydrate asheshayo, kanye nokuqukethwe okuphansi kwekhalori. Onke amaswidi, namakhekhe, utshwala, amanoni, othosiwe, isikhuphasha senkukhu asifakwa.
Akunasidingo sokwenqaba isiguli ukuphuza amanzi - udinga ukuwaphuza inala, ngokwenele njengoba ufuna. Lokhu kuzokuvumela ukuthi ususe ngokushesha ushukela kumchamo, unciphise ukuqina kwalo egazini.
Ngemuva kokufaka ukuhleleka, ukuhlelwa kokulungiswa kokunciphisa ushukela kuyenziwa, kungenzeka ukwandisa umthamo we-insulin. Lapho usebenzisa i-insulin ehlanganisiwe, kuyadingeka ukudlulisa isiguli esimweni sokudla esilula kuze kube yilapho i-carbohydrate metabolism isizinzile.
Kubalulekile ukunaka isisindo somzimba, ngoba ukukhuluphala kuholela ekuthuthukisweni kwezinkinga ngokushesha kunesisindo somzimba esijwayelekile. Kubalulekile ukuqonda ukuthi kudingeka kubhekwe ngokukhethekile ekuqondisweni kwama-glycemic indices, ngoba ukuba khona kwe-glucosuria kuncike kubo. Kwesinye isikhathi lokhu kuyindlela ende ende, ikakhulukazi ngesifo sikashukela sohlobo 2.
Funda futhi Ukuthini ukujuluka kweshukela kushukela?
Kunesilinganiso esikhulu somuthi wendabuko okuvumela ukuthi ulwehlise ushukela wegazi futhi uluqede emchameni. Okuthandwa kakhulu futhi okusebenzayo yilezo.
Isilinganiso sezitshalo zokwelapha. Kuyadingeka ukuthatha isilinganiso esilinganayo:
amaqabunga e-nettle ajwayelekile,
Into eyomile ixubene kahle, emva kwalokho ithululelwa ngamanzi abilayo. Isitsha kumele sivalwe imizuzu eyi-10, ukuze umhluzi uthele, ukhathale. Ngemuva kwalokho ithuluzi liyahlungwa. Ukwemukelwa kwenziwa kumamililitha ayi-15 kathathu ngosuku, inkambo yokwelashwa iyizinsuku eziyi-10.
Ukuze kusetshenziswe le ndlela, imbewu ye-oat kufanele igezwe kahle emanzini. Kuyadingeka ukuthatha into eyomile ngamanzi abilayo ngesilinganiso esingu-1: 5, bese ubilisa umkhiqizo okungenani ihora. Lapho-ke umhluzi uyahlungwa, uqweqwe. Kufanele idliwe ngamamililitha angama-200 ngaphambi kokudla ngakunye.
Izipuni ezimbili zamaqabunga aluhlaza okwesibhakabhaka zibilisiwe ngamamililitha amanzi ayi-300 imizuzu engaba yishumi. Ithuluzi futhi kufanele lingahlungwa, emva kwalokho lidliwe ingilazi yengxenye yehora ngaphambi kokudla,
I-Cinnamon inempahla encane ye-hypoglycemic. Ingafakwa ekudleni cishe isigamu sezipuni. Inkambo yokwelashwa ihlala kuze kube amasonto amabili.
Ukuze uvikele ukwanda ngokweqile koshukela wegazi ngokukhula okulandelayo kwe-glucosuria, udinga ukulandela imithetho elula.
Nikeza ukukhetha kokudla okunenkomba ye-glycemic ephansi kanye nenani elikhulu le-fiber yokudla, i-fiber. Lokhu kuzogwema ukuguquguquka okubushelelezi kushukela, kanye nokubonisa okuhle ku-lipid spectrum.
Ukudla kufanele kufake okungenani izidlo ezi-4, futhi ukubhuka akumele kube kukhulu kunenqindi yakho. Lesi sinyathelo sinciphisa izinga lokufakwa kwe-carbohydrate, ukuvimbela ukwanda koshukela wegazi.
Khipha ushukela, usawoti, nokudla okunamafutha ekudleni.
Izikhathi ezithile zingena enkambweni yokuvimbela ukuthatha ama-vitamin complexes.
Naka imfundo yezomzimba, ezogwema isisindo ngokweqile, kanye nokwenza ngcono imetabolism ye-carbohydrate.
Kubalulekile ukuqonda ukuthi ukubonakala kwe-glucosuria kushukela kungenye yezindlela zokunciphiswa kwalesi sifo. Ngaphezu kwalokho, inkambo esetshenzisiwe iboniswa kabi ekuvezweni kwekhwalithi yempilo yeziguli.
Ngesikhathi sokusebenza kwezinso okujwayelekile, ushukela udonswa ngokuphelele ezingxenyeni ze-proximal renal tubules futhi ukusuka lapho kungena ukungena kwegazi, okungukuthi, akufanele kube semchameni. Ngokwanda kokuhlungwa koshukela egazini (ngenhla kwe-9.9 mmol / l), izinso azihambelani nomsebenzi wazo, futhi ingxenye yeglucose ingena kumchamo.
Kungani ushukela uvele umchamo lapho uthatha izivivinyo, kusho ukuthini lokhu? Enye imbangela ye-glucosuria kungaba ukuncipha komkhawulo wezinso, obonwa ngeminyaka noma unesifo sezinso esingamahlalakhona.
Izici ezibangela ukuvela kwe-glucose ye-pathological kumchamo, wedlula izinga elijwayelekile kwabesilisa nakwabesifazane:
Imbangela evame kakhulu uhlobo 1 lwesifo sikashukela. Ngokuthuthukiswa kwalesi sifo, i-hyperglycemia yegazi ikhona.
Isifo sezinso: i-pyelonephritis, nephrosis, ukwehluleka kwezinso, glomerulonephritis.
I-pathologies yesibindi: Isifo sikaGirke, isifo sokusha kwesibindi, i-cirrhosis.
Ukugula kobuchopho: i-meningitis, i-encephalitis, umdlavuza, ukulimala kobuchopho obuhlukumezanayo.
Izifo zohlelo lwe-endocrine: i-hypothyroidism, ukungalingani kwe-hormonal, i-thyrotooticosis.
Isifo sohlangothi lwe-hemorrhagic.
Ubuthi bamakhemikhali nge-phosphorus, i-morphine derivatives, chloroform, strychnine.
I-glucose yomzimba kumchamo inokukhula okuningana kwezimo ezicindezelayo, ukusebenza komzimba okusebenzayo kanye nokusebenza ngokweqile. Ukwelashwa ngemithi ethile elwa nokuvuvukala kunomthelela oseceleni - i-glucosuria. Izinga eliphakeme legazi nomchamo ungabonakala uma udla amaswidi amaningi ngokushesha ngaphambi kokuthatha isivivinyo.
Ukuvela kwe-glucose kumchamo kungavusa izifo ezahlukahlukene:
Ukuhlukumezeka kakhulu ezinso,
ubuthi ngamakhemikhali (phosphorus, morphine, chloroform noma i-carbon monoxide),
ukucasuka kohlelo lwezinzwa ngenxa yokulimala kobuchopho kobuhlungu,
Isifo sayo i-Itsenko-Cushing,
ukubanjwa isifo sokuwa
ukuphambuka ekusebenzeni kwezinso,
i-pathology ye-glomeruli kanye ne-tubules yezinso (isibonelo, glomerulonephritis, nephritis ye-interstitial).
Isifo sikashukela i-mellitus yisona esivame kakhulu kulezi zimbangela zokukhuphuka ushukela kumchamo, ngaphezu kwalokho, sincike kwe-insulin.
Ukwanda koshukela womchamo kungabonakala kwabesifazane abakhulelwe ngisho noma kungekho zifo. Ngakho-ke, umzimba ungaphendula emithwalweni eyengeziwe ehlobene nokukhula okukhulu kwesibeletho.
IGlucosuria iphinde icasulwe yilokhu:
ukuthatha ama-painkiller, sedative,
ama-adrenocorticotropic amahomoni nama-corticosteroids,
ukungena njalo nokudla okuningi kokudla okune-carbohydrate,
ukungezwani kwemisipha, izimo ezicindezelayo.
IGlucosuria yisimo sempilo lapho kutholakala ushukela ezivivinyweni zomchamo welebhu, okubonisa ukwehluleka kumetabolism yama-carbohydrate. Ukutholwa kwe-glucose kumchamo kungahle kube ngenxa yokushintshwa kwegazi ezakhiweni zezinso noma ukuphambuka ezinqubweni zokuphuma kwezinso kwe-carbohydrate.
Ungumchamo oyisisekelo ohlanganisiwe, okuphuma kuwo cishe wonke ama-ion we-sodium, potassium ne-chlorine, kanye noshukela. Inani lomchamo wesibili lihambisana nezinga lamanzi aphuzwa phakathi nosuku.
Lo mkhawulo ungahluka ngaphakathi kwamayunithi ama-1-2 kumuntu ngamunye. Umbundu wezinso uhambelana ne-6-7% ye-glycosylated hemoglobin yegazi lesiguli esinesifo sikashukela i-mellitus, esivumela ukuthi sikhombise isithombe somtholampilo ezinyangeni ezimbalwa ezedlule. Ushukela we-urine ohlobo lwe-2 mellitus yesifo sikashukela unqunywa kakade ezigabeni zokuqala zesifo, kuyilapho kungasabikho isithombe esicacile somtholampilo sokuphazamiseka kwengqondo kwe-endocrinological kanye ne-metabolic emzimbeni wesiguli.
Ukugcwala okukhulu kwe-glucose kumchamo kwandisa umfutho we-osmotic emchameni, okuholela ekususweni ngokweqile kwamanzi emzimbeni. Ngalesi sizathu, enye yezimpawu zokuqala zesifo sikashukela sohlobo 2 ukuchama kaningi - i-polyuria. Ngenxa yesifo sikashukela, umchamo uya ngokuya ugxile, ngoba Kanye noshukela, inani elikhulu lamanzi likhishwa emzimbeni. Uhlelo lokuchama kubantu abanesifo sikashukela luhlose ukunxephezela i-hyperglycemia - ushukela wegazi ophezulu.
Lapho udlula ekuhlolweni komchamo ojwayelekile, ushukela ojwayelekile akufanele unqunywe nhlobo, inani lokuncishiswa kwenqolobane ngu-1.5 mmol / L. Ngaphezu kwalokho, uma inani lomkhawulo lidluliswa, emiphumeleni yokuhlaziywa kweshukela kumchamo kuzoba okuhle. Ngaphezu kokuxoshwa ngokuqondile kwe-glucose kumchamo wokugcina, kunesinye isisekelo esibalulekile - ubukhulu bomchamo. Ubungako obujwayelekile besihlobo buhlukahluka kusuka ku-1.011 - 1.025, okubizwa ngokuthi yi-standardostenuria. Ku-mellitus yesifo sikashukela, amandla adonsela phansi aphakeme kune-1,025, futhi ngokuhlanganiswa ne-polyuria ibizwa nge- hyperstenuria.
Kuyaqapheleka ukuthi ukugcwala kwe-glucose kumchamo ngeke kunikeze idatha ngokuphelele ngesimo sesiguli, ngoba ukwahluka kwamapharamitha kumuntu ngamunye kudala iphutha elikhulu.Ngalesi sizathu, indlela esemqoka ihlala nokuzimisela kwe-glucose egazini le-venous kanye ne-glycosylated hemoglobin ukuthola isifo esinembile.
Uhlobo lwesifo sikashukela
Yize iqiniso lokuthi i-glucose ikhishwa kanye nomchamo waluphi uhlobo lwesifo sikashukela, lesi sici sibonisa kakhulu isifo sikashukela sohlobo 1, i.e. kuya nge-insulin, lapho umchamo unquma khona ushukela ophakeme kakhulu.
I-insulin ye-hormone iyadingeka ekuvuseleleni ushukela okujwayelekile, noma kunjalo, ohlotsheni lokuqala ukukhiqizwa kwayo kuncane kakhulu noma kungenzeka kungabikho ngokuphelele, okuholela ekwandeni okukhulu kwengcindezi ye-osmolar eplasma naseglucosuria. Kubalulekile ukucubungula ukuthi lo msubelo onxephezelayo kashukela ovela egazini kanye nomchamo uholela ekwandeni kokuphelelwa ngamandla, noma ukomisa komzimba, okuyisici sokucindezela kuwo wonke izicubu nezitho zomzimba.
I-glucosuria yesinxephezelo ku-mellitus yesifo sikashukela iyisici esiyingozi sokwenzeka kwezifo ezinso, ngoba izinso kuleli cala zisebenza ngendlela ethuthukisiwe futhi ziguga ngokushesha. Abantu abanesifo sikashukela abanalolu phawu kufanele belashwe. Ezigulini ezinohlobo oluthembele nge-insulin yesifo sikashukela, kufanele kunqunywe ukwelashwa kwe-hormone nge-insulin. Ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2, ukwelashwa kuqukethe ukuthatha izidakamizwa ezinciphisa ushukela bese kulandela ukudla okuqinile okudla okulinganiselwe kokudla kwe-carbohydrate. Ngezindlela ezisezingeni eliphakeme zalesi sifo, iziguli kufanele zithole ukwelashwa okusebenzisa izidakamizwa - nephroprotectors.
Ushukela kumchamo: izimbangela, izindlela zokuzimisela, ukwelashwa
Ushukela kumchamo uwuphawu oluyingozi. Kuxwayisa ngesifo sikashukela noma ngokungasebenzi kahle kwezinso, isibindi, amanyikwe. Wonke amacala ayingozi empilweni, adinga ukuhlolwa nokwelashwa.
Kumuntu ophile kahle, ushukela ovela ekudleni ucijwa egazini cishe ngokuphelele. Okungafakwayo amaseli kungena ezinso, lapho kuhlungwa kusetshenziswa uhlelo lwe-glomerular. Imikhuba yoshukela emchameni ngu-0.06-0.0083 mmol / l.
Leli nani lincane kangangokuba iqoqo alinqunywa ngokuhlaziywa okujwayelekile nangokwezinto eziphilayo (kunquma ukuthi akukho ushukela). Lapho lo mkhawulo usudlulile, izivivinyo ziqala "ukubona" ​​ushukela, futhi ivelu yawo ingabekwa ngokuqondile.
Ushukela we-Urinary uphakama ngezizathu eziningi:
Izimbangela ze-hyperglycemia ne-glucosuria (ukukhuphuka koshukela egazini nomchamo) kungenzeka zingahambisani ne-pathologies nezifo, kepha kucasulwa yizinto ezingahleliwe. I-glucosuria yomzimba yinto yesikhashana engadingi ukwelashwa. Kwenzeka ngenxa yezizathu zokudla okunempilo (umsoco), isimo esingokomzwelo nokukhulelwa.
Isici se-Alimentary - okweqile kokudla okumnandi, okunesitashi. Ama-carbohydrate aqhekezwa kushukela olula, adluliselwe ezithweni eziqondisiwe, kuthi okunye okusele kucholwe emchameni. Isikhathi esiningi sidlula ekudleni, yehlisa inani likashukela ngokuya ngocwaningo.
Iglucose inyuka ngenxa yezimo ezicindezelayo.
Ngesikhathi sokukhulelwa, imiphumela ye-urinalysis kungenzeka ingahambi ngaphezulu kokujwayelekile. Noma enye indlela - kuvela umkhondo we-glucose, ongakakhombisi ubungozi ngokutholwa okukodwa.
Kepha uma i-glucosuria iye yatholakala kaningana, lokhu kungaba wuphawu lwesifo sikashukela sokukhulelwa. Ukwanda kwe-glucose kuyaqhubeka kuze kube yilapho ingane izala. Lesi simo sidinga ukubonwa nokulungiswa.
Kwabesilisa nabesifazane, ushukela ukhuphuka ngokuzikhandla okukhulu ngokomzimba, indlala (ukuwohloka okusebenzayo kwe-glycogen), ukudla okungalinganiseli. Ukwanda koshukela emchameni kwenzeka ngenxa yokufakelwa kokulimala noma ukubuyiselwa kokubuyiselwa kwezinto kusuka kumchamo oyinhloko yizinso.
I-Glucosuria njengophawu lwe-pathologies
Ku-mellitus yesifo sikashukela, izinkomba ze-pathology azinzima ukuthola: ukoma okungapheli, iphunga le-acetone emlonyeni, okuvela kumchamo nakwezinye izimbotshana. Izimpawu ezengeziwe isikhumba esomile, ukwazi ukungasebenzi kahle, imvamisa ekhuphukayo kanye nokuchama okungahambi kahle, ukunciphisa umzimba.
Isifo sikashukela sohlobo lokuqala singumphumela wokukhiqizwa kwe-insulin enganele. Le hormone idlulisela ama-molecule eglucose kulezo zitho lapho idingeka khona, futhi, njengesihluthulelo, “ivula” amangqamuzana ukuba amunce ushukela.
Ngohlobo 2 sikashukela, i-insulin ikhiqizwa ngokwanele, kepha ayisebenzi futhi ayikwazi ukubamba ushukela. Kunesimo se-glucoseemia engapheli (ushukela wegazi), ngenxa yokuthi izitho ziphi izitho ezilimele. I-insulin ikhiqizwa emgqonyeni we pancreas, ngakho-ke uma ilimala, umsebenzi wayo uyaphazamiseka futhi ushukela ungakhula.
I-glucose ingaphuma nomchamo uma kungenzeka ihlaselwe izifo ezithathelanayo nezinye izifo zezinso: glomerulo-, nephritis ese-interstitial, iFanconi syndrome.
I-Renal glucosuria yinto eyivelakancane. Kulesi simo, ushukela wegazi uvamile, kepha namanje ukhishwa kumchamo. Ukuhlanjululwa ezinso kuyinto ejwayelekile, kepha i-glucose ayibuyiselwa egazini.
I-glucosuria ye-renal ingahle ibe eyinhloko noma yesibili. Okuyinhloko kudalwa yisici sofuzo, kwesibili kutholakala ukukhulelwa noma ubuthi obunezinto ezinobuthi. Le yi-florizin (ingxenye yamagxolo ezihlahla zezithelo), amakhompiyutha (i-carbon monoxide, i-phosphorus, i-chloroform) noma izidakamizwa (morphine, strychnine).
Kukhona namanye ama-pathologies lapho kuvela khona ushukela emchameni:
izilonda zohlelo oluphambili lwezinzwa.
Izilonda ze-CNS zilimaza ebuchosheni bokulimala, ama-hemorrhages, isimila sobuchopho, i-meningitis, noma ezinye izifo zobuchopho. Kwesinye isikhathi i-glucosuria ikhuluma ngokwephulwa okukhulu komsebenzi wezitho zangaphakathi: i-pathology yesibindi, ukwehluleka kwezinso.
Iqoqo lomchamo we-algorithm ushukela
Noma yiziphi izinhlobo zokuphazamiseka okuholela ekubonakaleni kwe-glucose kumchamo, kuyadingeka ukulawula izinga layo. Unganquma inani loshukela elabhorethri noma ekhaya.
Bahlola umchamo ngezindlela ezihlukile:
isampula yokudla kwasekuseni (i-OAM),
konke diuresis nsuku zonke,
i-Express test (imichilo yokuhlola).
Qala ngokuhlaziya isampula lomchamo wasekuseni. I-biomaterial iqoqwa ngemuva kwenhlanzeko yesitho sangasese sangasese esitsheni esingenantambo. Kuphela ingxenye efanelekile yomchamo ophuma lapho uchama okokuqala ngemuva kokulala ebusuku ofanele. Lapho i-OAM ibona ushukela, i-assay iphindwa izikhathi ezi-2 ngaphezulu. Ukwethenjwa komphumela kuphezulu uma umchamo uhanjiswa elabhoratri kungakapheli amahora angama-1-2 kusukela ngesikhathi sokuqoqa.
I-glucosuria ephindaphindwayo iyisisekelo sokuphenya i-diuresis yansuku zonke. Umchamo uqoqwe esitsheni esingenantambo amahora angama-24, ukhishwe yonke ingxenye ngaphandle kweyokuqala. Gcina uketshezi oluqoqwe ngaphambilini endaweni emnyama epholile. Ngemuva kosuku, lonke uketshezi luyavuseleleka, kuthathwe ama-150 ml esitsheni bese athunyelwa elabhorethri.
Kepha indlela elula yokuhlola ushukela ekhaya ukusebenzisa amasistimu wokuhlola. Abesifazane nabesilisa baqoqa umchamo othile, behlise umucu wokuhlola ngokungena ngaphakathi kuye kufinyelele ezingeni elifunekayo bese belinda. Umbala webala uqhathaniswa nokumaka iphakethe. Le ndlela ayinikezeli inkomba enembile, kuphela ububanzi bamanani.
Imichilo yokuhlola esheshayo ithengiswa ngaphezulu kwekhawunta.
Abasebenzisi bayatholakala ngamaqoqo wezingcezu ezingama-25, ezingama-50 nezingu-100. Lokhu kusho ukuthi umuntu ngokwakhe ukhetha ikhithi ayifunayo, ngokuya ngemvamisa yokusebenzisa.
Njengoba lokhu kudla kubalulekile, kubalulekile ukukhipha iphalishi elimnandi, lefulawa, le-buckwheat ngaphambi kosuku lokuhlaziywa. Uhlu lwemikhiqizo enqatshelwe luhlanganisa zonke izinhlobo zezithelo nemifino ezinemibala ekhanyayo: i-beet, i-orange, i-mandarin, izaqathe, njll.
Njengoba kuphawuliwe ngenhla, i-glucosuria ivame ukubonwa njengomphumela wesifo sikashukela.Ngalesi sifo, kukhona isihlobo (noma ngokuphelele) sokuntuleka kokukhiqizwa kwe-insulin - le hormone ilawula ukusetshenziswa kwe-glucose ngezicubu nokwenziwa kwe-glycogen kusuka glucose esibindini.
Ngokuntuleka kwe-insulin, i-glycogen synthesis iyancipha, okukhuphula ushukela bese kutholakala umchamo, izinga lawo liyahlukahluka ukusuka ekulandeleni okubuthakathaka kuya kumaphesenti ayi-1,2.
Ukuthola ushukela emchameni, kusetshenziswa izindlela ze-elebhu nezindlela zokuhlola. Ngasikhathi sinye, kuhlolwa nsuku zonke kanye nomchamo ojwayelekile. Ake sibheke lezi zindlela ngemininingwane eminingi.
Izindlela zokulinganisa. Usebenzisa izindlela ezinjalo, iqiniso lokuba khona kwe-glucose ku-urinalysis liyatholakala. Lezi izindlela ezishibhile lapho ama-reagents emapheshana ephepha esetshenziselwa ucwaningo (imvamisa glucotest, glucophane). Naphezu kokulula kwayo, kusetshenziswa izindlela ezisezingeni eliphakeme, ukwephulwa kwe-carbohydrate metabolism kuyahlolwa. Isibonelo, i-glucosuria izosungulwa uma ushukela omchameni ungama-2 mmol / L (ngokwesilinganiso esijwayelekile - 1.7 mmol / L).
Izindlela zokulinganisa. Izindlela ezinjalo zifaka izifundo ze-polarimetric, indlela yamaGaines, kanye ne-glucose oxidase enzymatic indlela. Kulezi zivivinyo zomchamo, ikhono likashukela lokwenza i-compounds nama-reagents aguqula izakhiwo zesisombululo asetshenziswa. Izinguquko eziholelwayo zinquma ukuhlangana kweglucose umthamo weyunithi womchamo ngamunye.
I-Glycated hemoglobin - indlela yokudlulisa ukuhlaziya nokuthi imiphumela izotshela ini
Ezigulini ezitholakala sinesifo sikashukela, ushukela okuchama uhlangana nokuqukethwe kanyekanye kwe-glucose ekuhlolweni kwegazi (lesi simo sibizwa ngokuthi i-glycemia). Ezimweni ezinjalo, kuyaphawulwa:
ukwehla noma ukwanda kwesisindo somzimba,
Ukwelashwa okuvikelekile kwezifo ezithinta umchamo.
Uma isiguli singafaki isicelo sokuqokwa ekwelashweni, khona-ke inkambo yesifo sikashukela ingaya ngesimo esibi, lapho kungenzeka:
ukubonakala komchamo we-acetone nemizimba ye-ketum, ngenkathi umchamo uthola iphunga elibonakalayo,
umthamo womchamo owengeziwe (i-polyuria), ngenkathi amandla athile adonsela phansi ancipha.
Ungawususa kanjani ushukela emchameni? Ukwelashwa kuqukethe ukuqeda izimbangela ze-glucosuria, ngoba akusona isifo esizimele. Izifo ezidonsela ukukhipha ushukela emchameni, ngenxa yentuthuko yanamuhla yezokwelapha, ziyelapheka.
Kuzo zonke izifo, thayipha isifo sikashukela esingu-1 mellitus (esincike ku-insulin) esiyingozi kakhulu; ukwelashwa kwaso kuqukethe ukwelashwa kwesondlo, ukusetshenziswa kwaso okuvumela isiguli ukuthi siphile impilo ephelele.
Into yokuqala udokotela azoyinikeza ukuqala ukwelashwa kwe-glucosuria ukulandela ukudla okhethekile kweziguli ezinesifo sikashukela. Ukudla okunjalo kufaka okuhlukile kwimenyu yansuku zonke:
ukudla okunamafutha nokuthosiwe.
Kuyadingeka ukwenze isisindo somzimba sibe ngokwejwayelekile, uma lokhu kungeqile, ngoba isifo sikashukela sibangela izinkinga zokukhuluphala.
Ekuqaleni kokwelashwa, ukwelashwa kuqondiswe ekulinganiseni amazinga kashukela egazini, bese kuthi umchamo. Kumele kukhunjulwe ukuthi ukutakula ngeke kufike ngokushesha.
Kunezizathu eziningi zokuvela koshukela emchameni. Kodwa-ke, odokotela bavame ukukholelwa ukuthi isifo sikashukela siyimbangela eyinhloko ye-glucosuria.
Ezinye izimbangela zeshukela lomchamo elandayo zihlanganisa ukungasebenzi kahle kwezintso. Ezimweni ezinjalo, umsebenzi obambezeleka ubonwa lapho ushukela egxilwa usuka ezingxenyeni zezinso.
Ukuvela koshukela emchameni wengane kubhekwa njengophawu olwethusayo. Kubhekwa njengengozi enkulu kunokukhulisa ushukela wegazi.
Ngokugcotshwa kakhulu koshukela emchameni, ingane ingaba nezinkinga ngohlelo lwe-endocrine. Ngakho-ke, kubalulekile ukuxhumana ne-endocrinologist ngesikhathi.
I-Glucosuria nayo ingadalwa izifo zama pancreas noma izinso.
Ukucasulwa kohlelo oluphambili lwezinzwa (isithuthwane, njll.).
Izifo ezithathelanayo ezinzima.
Ushukela kumchamo ezinganeni
Kungani kuvela ushukela omningi kumchamo wengane, kusho ukuthini lokhu, yini imbangela yamazinga aphezulu kashukela? Ezinganeni, i-pathology itholwa ngokumelene nesizinda sezinqubo ze-metabolic, izifo ze-autoimmune, ukungondleki, ukwelashwa isikhathi eside ngezidakamizwa ezithile. Izinkomba ezijwayelekile zokuhlaziya ukuhlaziya ziyefana nemiphumela kubantu abadala.
Izinsana zivivinya igazi elengeziwe nge-glucose esheshayo, umchamo wansuku zonke. Uma kunesidingo, yenza isivivinyo sokubekezelela ushukela.
Ungayelapha kanjani ingane futhi ususe ushukela emchameni, yimiphi imiphumela ebangelwa yilezi zingxaki ebuntwaneni? Ukwelapha izimpawu ze-glucusiria, kuyadingeka ukuqeda imbangela yokubonakala kwayo. Uma kubangelwa ukwephulwa kwe-carbohydrate metabolism, i-mellitus yesifo sikashukela, khona-ke i-endocrinologist ibeka ukwelashwa, icubungula uhlobo lwe-pathology.
Ekwelapheni kwefomu elincike ku-insulin, izingane zifakwa ngomjovo wama-hormone futhi kudlalwa ne-carb ephansi. Iziguli zohlobo lwesibili zinokwelashwa okwanele kokudla kanye nokuzivocavoca ngokomzimba, kwezinye izimo ukugula kudinga ukunxeshezelwa ngemithi enciphisa ushukela.
Ukuvela koshukela emchameni wengane kubhekwa njengophawu olwethusayo. Kubhekwa njengengozi enkulu kunokukhulisa ushukela wegazi. Ngokugcotshwa kakhulu koshukela emchameni, ingane ingaba nezinkinga ngohlelo lwe-endocrine. Ngakho-ke, kubalulekile ukuxhumana ne-endocrinologist ngesikhathi. I-Glucosuria nayo ingadalwa izifo zama pancreas noma izinso.
Imithetho Yokuqoqa Umchamo
Ukwethembeka kocwaningo kuthinteka kakhulu ekuhlaziyweni okuyikho. Ukunikeza ukuhlaziywa, uchwepheshe kufanele aelule isiguli ngemithetho yokuqoqa umchamo.
Ukunaka! Kumele kwaziwe ukuthi okuhlangenwe nakho okuqinile kwezinzwa, izinkinga zokudla kanye nezinye izici zangaphandle zingathinta imiphumela yocwaningo.
Imithetho yokuhlaziywa ilula. Ezimweni eziningi, isiguli sithola imiyalo ezandleni, esibonisa ngqo ukuthi iziphi izincomo okufanele zilandelwe lapho kuqoqwa umchamo.
Ungalungiselela ukuhlaziya ngale ndlela elandelayo:
Emahoreni angama-24 ngaphambi kokuqala kokuhlaziywa, imikhiqizo eminingi enezici zokufaka imibala kufanele ingafakwa. Lolu hlu lubandakanya ama-beet, amawolintshi namagilebhisi, utamatisi kanye nezaqathi. Kunconywa futhi ukulahla ukusetshenziswa kokudla okuqukethe inani elikhulu lama-carbohydrate: amakhekhe amnandi, ushokoledi, amaswidi, ujamu, njll. Ukwanda okubabayo kweshukela okwesikhashana emzimbeni kungathinta kabi ukuthembeka kocwaningo.
Khawulela umsebenzi wokuzivocavoca cishe amahora angama-18-20 ngaphambi kokuqala kokuhlaziywa. Ukusebenza ngokweqile kungathinta ukusebenza kohlelo lomchamo.
Kuyadingeka ukuthi uxwayise udokotela kusengaphambili ngamalungiselelo emithi athathwe. Uma kungenzeka, kufanele uyeke ukusetshenziswa kwawo okungenani ngosuku ngaphambi kokuqoqa umchamo.
Ungaphuzi ngokweqile uketshezi ngaphambi kokuhlolwa.
Kunconywa ukunciphisa umkhawulo wokucindezeleka okungokomzwelo nezimo zokungqubuzana
Lapho uqoqa ukuhlolwa okujwayelekile komchamo ushukela, izincomo ezilandelayo kufanele zibhekwe:
Kuyadingeka ukulungiselela isitsha esomile esomile sokuqoqa umchamo.
Ngokushesha ngaphambi kokuhlaziywa, udinga ukugeza ngokuphelele i-perineum usebenzisa insipho noma i-ejenti yokuhlanzeka okuseduze.
Ingxenye emaphakathi yomchamo kufanele iqoqwe esitsheni somchamo. Lokho wukuthi, kufanele uqale ngokuchama endlini yangasese.
Ngemuva kokuqoqa okusetshenziswayo, kunconyelwa ukuthi uvale ngokuqinile isitsha bese usiletha elabhorethri kungakapheli amahora angama-2-3.
Ukunaka! Ngaphambi kwesifundo, akufanele udle ukudla noma yiluphi uketshezi.Ngaphandle kwalokho, imiphumela yokuhlaziya ingaba yithemba.
Ukuhlaziywa okwenziwe kahle kuzovumela ongoti ukuthi bakwazi ukuthola idatha kushukela we-glucose emahoreni ayi-6-10 ebusuku. Izinkomba ezedlula i-7.5-7.8 mmol / lit ziyizimpawu zokuphindaphindwa kwe-glucosuria nokuphazamiseka okunamandla komzimba emzimbeni wesiguli.
Ukuhlolwa komchamo okulinganisa ukuqina koshukela kumchamo kushibhile futhi kulula kunesampula yegazi, kodwa kunzima ukuthola isifo sikashukela naso. I-glucose kumchamo itholakala kuphela ngemuva kokuthi okuqukethwe kwayo okusegazini kudlule umkhawulo we-10 mmol ilitha, kuyilapho isilinganiso esikhulu esivunyelwe singu-7.8.
Izinso zivuselela inani elithile likashukela kuphela, ngemuva kokudlulela kokuhlushwa, liqala ukuthululwa kumchamo. Umkhawulo we-renal (yilokhu inkomba okubizwa ngokuthi ngochwepheshe) kubanga ngalinye umuntu ngamunye futhi onempahla yokuncipha.
Ngakho-ke, i-urinalysis ayisizi ukulawula i-glucosuria kwisifo sikashukela futhi ayikwazi ukufaka okunye ukuhlolwa kwegazi. Kodwa-ke, unikezwe iziguli njalo enye injongo.
Ngalo, udokotela uqapha ukusebenza kwezinso zesiguli. Ngakho-ke, ukunakwa okuningi kukhokhelwa ekubeni khona kwamaprotheni kumchamo.
Lesi simo sibizwa ngokuthi yi-microalbuminuria futhi kungaholela ekwehlulekeni kwezintso. Ezinye izinhlobo zokuhlaziywa komchamo zinquma okuqukethwe kwe-diastases kuwo.
Le enzyme ibhekene nokuqhekeka kwama-carbohydrate ayinkimbinkimbi. Ukuba khona kwayo kukhombisa i-pancreatitis eyingozi.
Ushukela omningi kumchamo, okufanele ukwenze, ungancishiswa kanjani? I-Glycosuria, okokuqala, ikhombisa ukwephulwa kwezinqubo ze-metabolic zomzimba. Ngakho-ke, isiguli kufanele sidle ukudla okulinganiselayo, sithole irejimeni yansuku zonke, futhi sinqume ukudla okugcwele ama-carbohydrate angagayeka kalula. Ukuzivocavoca kusebenza kakhulu. Basiza umzimba ukuthola i-glucose kangcono.
Uma ukhuluphele ngokweqile, kufanele unikeze ukukhetha kokudla okuphansi kwekhalori. Ukulahlekelwa isisindo kunciphisa ingozi yokuba nesifo sikashukela nezinkinga zako. Isiguli siyelulekwa ukuba siyeke ukubhema notshwala, ngoba imikhuba emibi yandisa ukuhamba kwezifo eziningi.
I-Urinalysis wucwaningo olubalulekile lwelebhu olungakhomba izimbangela zokungasebenzi kahle kwezitho eziningi nezinhlelo. IGlycosuria ixwayisa ngokwehluleka kwe-carbohydrate metabolism, izifo zezinso, isibindi nobuchopho. Ukuxilongwa ngesikhathi kanye nokwelashwa kwezinqubo ze-pathological kuzogwema izinkinga ezinkulu.
Ukuletha i-glucose ejwayelekile, okokuqala kuyadingeka ukuthola imbangela yokuthuthukiswa kwe-glucosuria. Kepha noma kunjalo, into yokuqala okufanele uyenze ukulungisa indlela odla ngayo.
Ukudla okunoshukela omningi kubandakanya ukungafakwa kokudla okumnandi, uphuzo oludakayo, ukulondolozwa kokudla okune-carb ephezulu nezitsha zokudla kwakho.
Ekwelapheni i-glucosuria, eyakheka ngokumelene nesizinda sesifo sikashukela, ukwelashwa kufanele kuhloswe ukugwema amazinga kashukela egazi futhi kuthuthukiswe umsoco wezicubu zomzimba. Okusho ukuthi, izindlela zokwelapha kuleli cala kuhloswe ngazo ukuqeda imbangela ngokwayo, okuholela ekubonakaleni kweglue emchameni.
Ngesikhathi sokulashwa, isiguli sinqunyelwe ekuthatheni uketshezi. Lokhu kuyadingeka ukunciphisa i-leaching ye-glucose evela emzimbeni. Kodwa-ke, kufanelekile ukucabanga ukuthi akunakwenzeka ukunciphisa ngokuqinile inani lamanzi asetshenziswa yisiguli, ngoba lokhu kungaholela ngokushesha ekuphelelwa ngumzimba.
Ngokuntuleka kwe-insulin engangeneki, isiguli sinqunywe ukujova okufakwayo komuthi. Uma umzimba wesiguli ukhiqiza awawo ama-hormone, kodwa ngamanani anganele, amaphilisi asuselwa ku-insulin anikezwa lowo muntu. Banxephezela ukusweleka kwaleli protein ebalulekile.
Ukunaka! Ukungezelela okwedlulele kwenza ukuba usawoti we-potassium usize ekusebenzeni okuvamile kohlelo lwethambo lomzimba kusuka emzimbeni wesiguli.Ukumisa lokhu kwephulwa, isiguli sinqunywe i-Asparkam, i-Potassium chloride, iPanangin, i-Potassium-magnesium asparaginate, njll. Imvamisa, i-potassium kanye nemijovo yamavithamini e-B nayo ivame ukubekwa.
Esikhathini sikashukela, ukumisa i-glucosuria, kufanele ulandele indlela yokudla. Ukondliwa okufanelekile kuyisisekelo sokwelapha kwalesi sifo se-metabolic.
Isisekelo sokudla kufanele kube yimifino, izithelo nemikhiqizo yobisi. Kuphoqelekile ukuthi kudliwe inyama eyosiwe eyanele.
Lokhu kunikeza umzimba inani elanele lezakhi zomzimba futhi kuqeda noshukela owedlulele. Ukudla kufanele kube njalo, ukudla okuhlanu ngosuku, ngezingxenye ezincane.
Lesi silinganiso sizosiza ukugcina amazinga kashukela egazini elithile.
Iziguli ezine-glucosuria yesifo sikashukela zingadla izithelo ezintsha ezintsha. Izintandokazi kufanele zinikezwe ama-apula omuncu noma amnandi futhi omuncu, ulamula, amapentshisi kanye nama-apricots.
Ukwehlisa ushukela omningi kumchamo, konke ukudla okuqukethe ushukela nosawoti okweqile kufanele kungafakwa ekudleni. Udinga ukulahla amaswidi noma ushokoledi, namakhekhe neminye imikhiqizo kafulawa.
Kuyafaneleka ukunikela ngokuthandwa isinkwa se-bran, njengoba senziwe kusuka ku-gluten eluhlaza futhi kubonakaliswa ngamaphesenti aphansi impela ama-carbohydrate asheshayo, akhulisa ngokuqinile okuqukethwe kwe-glucose kuketshezi lwegciwane lomuntu.
Kufanele futhi ushiye ukudla okusheshayo neminye imikhiqizo equkethe amafutha e-trans. Iziphuzo ze-Soda ziphikisana ngokuphelele neziguli ezine-glucosuria yesifo sikashukela. Bakhulisa ushukela wegazi ngendlela exakile futhi ngasikhathi sinye bavuselele ukuchama okusheshayo, ngenxa yalokho isiguli siphulukana noketshezi oluningi.
Ungawususa kanjani ushukela emchameni: izindlela zokupheka zemithi yendabuko
Umuthi ohlukile usiza ekunciphiseni i-glucose kumchamo.
Ukususa ushukela egazini nomchamo, udinga ukubhekana nembangela yezimpande - isifo sikashukela. Ukuze wenze lokhu, kufanele ulandele ekudleni kwabanesifo sikashukela.
Khipha kwimenyu yansuku zonke:
Kuyadingeka ukuqeda isisindo ngokweqile, uma kukhona eyodwa, njengoba ukukhuluphala nesifo sikashukela kungaholela ezinkingeni.
Kubalulekile ukuvikela i-hyperglycemia ekukhuleni, ngoba izinga le-glucose kumchamo lizokwenyuka nalo kuphela. Ukuvimbela lokhu, udinga ukulawula nsuku zonke ama-carbohydrate futhi ususe ubuthi emzimbeni. Kulokhu, ukudla kuzosiza futhi.
Lapho uthola izifo ezinganeni, kubalulekile ukuthi ubhekwe njalo uchwepheshe.
Shesha ukunciphisa ushukela wegazi futhi uqede ukubonakala kwawo kumchamo, usize ukwahlukanisa okwenziwe ngama-walnuts. Ukuze wenze lokhu, ezimbili wezipuni zehlukanisi eyomile kuthululelwa izinkomishi ezimbili zamanzi abilayo. Ukumiliselwa kulungiselelwe kungakapheli imizuzu engama-20. Kuthathwa isipuni esisodwa esikhulu ngaphambi kokudla ngakunye.
Futhi isho ukuthini le nkomba lapho umbala we-strip ushintsha usuka kokuluhlaza kuya kokuluhlaza okwesibhakabhaka? Lokhu kukhombisa umphumela omuhle.Ukuhlushwa okushukela okuphezulu kakhulu kumchamo, okunqunywa yimichilo yokuhlola, ngu-112 mol / l.
Njengoba ushukela wegazi ophakeme uwuphawu olujwayelekile lwesifo sikashukela, sizonikeza ingxoxo yethu namuhla kulesi sifo. Ngakho
I-diabetes mellitus yisifo esisheshayo sohlelo lwe-endocrine. lubonakala ngokuswelakala kwe-insulin, okuholela ekuholeni kokuphazamiseka komzimba emzimbeni, futhi ekugcineni - ekunqotshweni kwayo yonke imisebenzi yayo.
Ukuntuleka kwe-insulin kungaba ngokuphelele futhi okuhlobene; lezi yizinhlobo zokuqala nesibili zesifo sikashukela, ngokulandelana. Lesi sifo sisongela impilo futhi sidinga ukuhlolwa nokuqashelwa udokotela ngaso sonke isikhathi lesi sifo.
Isifo sikashukela sohlobo 1 sibizwa ngokuthi sincike kwe-insulin, ngoba i-insulin okumele ikhiqizwe ngamaseli we-pancreatic beta inikezwa kuphela ngamanani anganele. Ngale fomu, isiguli sidinga imijovo ye-insulin engaguquki.
Uhlobo lwesibili lwesifo ukuntuleka kwe-insulin, lapho kunesici khona lapho kukhiqizwa into enjenge-insulin yi-pancreas. Kukhona nezinye izinhlobo zezifo ezenzeka kaningi kakhulu ngenxa yokuba khona kwanoma iyiphi inqubo ye-pathological.
Ungangehlisa ushukela emchameni ngosizo lwe-infusions kanye nama-decoctions. Usebenzisa zokupheka zabantu ukwelashwa kwesifo sikashukela, ungathola umphumela obonakalayo.
Imiphumela kashukela kumchamo
Uma umuntu edla i-sweetie noma ethatha imithambo ephezulu yokuzivocavoca, khona-ke akufanele ukhathazeke ngempilo yakho, isikhashana esifushane, izinga leshukela egazini nomchamo uzobuyela kokujwayelekile.
Kodwa uma inani elandayo lesikhombisi elibhekiwe lingumphumela wanoma yisiphi isifo, imiphumela kashukela emchameni ingaba yinhlekelele. Ngokuphikisana nesizinda samanani aphakeme njalo, isifo sikashukela siqala ukukhula.
Kukhona i-lesion ehlelekile yomzimba wonke womuntu ogulayo, ukusebenza okujwayelekile kwamanzi kanye ne-carbohydrate metabolism kuyaphazamiseka, inkinga ngemithambo yegazi iyanda, engakwazi kepha ukuthinta ukusebenza kwamanyikwe.
Ukwehlulwa kuthinta ama-receptors aphathelene nohlelo lwezinzwa, kukhona ushintsho lwe-pathological emikhunjini ye-retina yeso. Kancane kancane, unyawo okuthiwa isifo sikashukela luyakhula, okuholela ekulahlekelweni kwemizwa endaweni yonyawo, ukuphazamiseka kwenzeka esikhunjeni, emalungeni njalonjalo.
Esikhathini esizayo, uma izinyathelo ezifanele zokwelashwa zingathathwanga, isiguli esinjalo singathola ubuthi bemikhawulo engezansi, bese ukunqunywa.
Ngakho-ke, kufanele usondele iqiniso ekuphendukeni ngokweqile njengokujwayelekile kokuqukethwe ushukela kumchamo. Ukunganaki ukuchezuka okunjalo kungaholela emiphumeleni ebulalayo.
Umuthi awubonisi ubunzima obuhambisana ne-glucosuria. Izinkinga ngenxa yesifo sikashukela zingabhekwa:
kunengozi yokuthola ukoma onesifo sikashukela,
izinga eliphakeme lokucabanga kwezifo ezithathelwanayo,
ngesikhathi sokukhulelwa - kungenzeka okukhulu kokukhipha isisu okuzenzakalelayo, i-polyhydramnios, ukufa kwe-fetus,
isifo sokuqina kwemithambo yegazi emithanjeni yegazi, ikakhulukazi imikhawulo ephansi,
i-retinopathy yesifo sikashukela (ukwehla kancane kancane kombono),
i-neuropathy (isikhumba esomile, i-peeling, ukuncipha kokuzwa, ukuqina okuvamile kanye nobuhlungu emilenzeni).
Ukudla kufanele kube okuphansi emafutheni futhi kuphakame endabeni yezitshalo. Okokuqala - izitsha ezinemifino nezithelo.
Faka nokudla okune-carbohydrate eyinkimbinkimbi kumenyu - lokhu kuzonciphisa ukudonsa kweglucose futhi kugcinwe amazinga we-cholesterol ephansi.
Kunconywa ukuthi udle ukudla ngezingxenye ezincane ngemuva kwamahora ama-4, ukusabalalisa konke ukudla ngokulinganayo usuku lonke. Lokhu kuzokwehlisa umthwalo kumanyikwe.
Nciphisa ukusetshenziswa kosawoti noshukela.
Gcina umkhondo wesisindo.
Thatha izakhiwo ze-multivitamin.
Imikhiqizo enconyiwe: isinkwa sokudla, oats, ilayisi, imifino, ibhali, i-buckwheat, iklabishi, amazambane, izithelo.
Bandakanya ukuzivocavoca okulula, hamba ngaphezulu.
Unganciphisa kanjani ukusebenza ngokudla
Ukuhlanzwa kwegazi ushukela ekhaya kuyenziwa, kubhekwa ukudla okulinganiselayo. Ukudla okufanele kuzosiza ukugcina impilo enhle, ukudambisa isimo sesiguli, futhi kuvikele nezinkinga ezingahle zibe khona.
Okunye ukudla okune-fiber ephezulu kusiza ekuqiniseni ushukela. Imikhiqizo enjalo ifaka ukhukhamba, i-grapefruit, i-buckwheat.
Ukususa ushukela emzimbeni ngezindlela zabantu, kubalulekile ukulandela imithetho ebalulekile:
Kuyadingeka ukuqala inqubo yokuhlanza umzimba ngokulungisa indlela odla ngayo. Kufanele udle izingxenye ezincane, kuze kube izikhathi eziyisithupha ngosuku.
Yenqaba imikhuba emibi: utshwala, ukubhema, izidakamizwa.
Konke ukudla okunoshukela, kanye nokudla okuqukethe amafutha ezilwane, kufanele kukhishwe ekudleni.
Ezinsukwini eziyi-7, susa ukudla kwe-carbohydrate kusuka kumenyu, bese uyifaka kancane kancane ekudleni futhi.
Izithelo kufanele zidliwe ngenani elilinganiselwe.
Unganciphisa ushukela ophakeme ngokudla nsuku zonke ukudla kwe-lactic acid - i-kefir neyogathi.
Ngokwengeza u-anyanisi negalikhi ekudleni, ungasusa isistimu yokujikeleza kwezinto ezinobungozi kanye nobuthi, kanye nokunciphisa inani likashukela.
Imifino elandelayo kufanele ifakwe kwimenyu yanshukela yansuku zonke:
Ngaphezu kwalokho, ukudla okuqukethe amaprotheni kufanele kufakwe ekudleni:
ushizi wekotishi onamafutha amancane.
Iziphuzo eziwusizo ezinoshukela wegazi ngokweqile zingaba:
itiye eluhlaza engafakiwe